April | 2019 | Radio Himilo
Man United oo lacag waali ah ku iibsaneysa goolhaye
Mahad Mohamed April 30, 2019
Himilo FM –Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay si dhab ah uga fiirsaneyso u dhaqaaqista goolhayaha Atletico Madrid Jan Oblak si uu ugu beddelo David de Gea. 26 jirkan ayaa lagu qiimeeyaa mid ka mid ah goolhayaasha ugu fiican ...
Maxay Australia uga taqaluseysaa labo Milayn oo bisad?
Himilo FM –Bisadaha waxaa lagu tiriyaa xayawaanada loogu jecel yahay ee rabaayada laga dhigto caalamka oo dhan hase ahaatee marka la fiiriyo Australia, sidaasi ma aha sheekada. Xukuumadda Australia ayaa ku dhawaaqday go’aan ku saabsan inay ka taqaluseyso ku dhawaad ...
Real Madrid oo heshiis shaqsi ah la gaartay wakiilka Ndombele
Himilo FM –Real Madrid ayaa wadahadallo kula jirta ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lyon saxiixa Tanguy Ndombele, sida ay ku waramayaan warbixinada maanta. Kooxda Faransiiska ayaa si qarsoodi ah u qirtay inay ku adkeysanayaan inay heystaan 22 jirkan xagaagan, maadaama uu ...
Hindiya: Dhimashada 20 arday oo lala xiriirinayo natiijadda imtixaanaadka
Himilo FM –Dalka Hindiya, ku dhawaad 20 arday ayaa ka taqalustay naftooda deegaano kala duwan markii lagu dhawaaqay natiijadda imtixaanaadka dugsiyada. Hal milyan oo carruur Hindi ah ayaa ka qeyb galay imtixaanaadka Febraayo illaa Maarso xilli ay dhaceen ku dhawaad ...
Ingiriiska: Carmal dhigatay aroos keligeed ah!
Himilo FM –Haweenay Ingiriis ah ayaa sameysay tijaabadii ugu horreysay ee aroos nuuciisa aan la arag inkastoo dad badan ku dhaliileen sida laga soo xigtay wargeyska Telegraph. Micheal Denton oo ah carmal ayaa ku fekertay inay guur keligeed ah sameysato ...
Tottenham oo kulamo saaxiibtinimo la ciyaari doonto kooxo dhowr ah
Himilo FM –Tottenham ayaa la ciyaari doonta Real Madrid, Bayern Munich iyo Fenerbahce Audi Cup xagaagaan. Audi ayaa la ciyaaraa kahor xilli ciyaareedka xilli lagu dheelayo Allianz Arena oo ay ku ciyaarto kooxda Munich labadii sanno ee la soo dhaafay. ...
Ahmed Haadi April 29, 2019
Daraasad: Quurada dumarka waa sida tan ragga!
Himilo FM –Waxaa jirta aragti taagneyd muddo dheer oo tilmaameysa in quurada xilliga hurdada tahay mushkilad ku kooban keliya ragga hase ahaatee daraasad cusub ayaa daaha ka qaaday in haweenka qudhooda ka cabanayaan quurada waliba si xad dhaaf ah. Inta ...
Dubai: Saacadaha waxbarashada oo la soo gaabinayo Ramadaanka
Himilo FM –Dugsiyada gaarka loo leeyahay ee ku yaalla magaalada Dubai ayaa soo gaabinaya saacadaha waxbarashada inta lagu guda jiro bisha Ramadan ee soo socota. Hay’adda kormeerta waxbarashada Dubai ee KHDA ayaa xustay in xisadaha dugsiyada bilaaban doonaan 8:00am ama ...